Lahatsary Miparitaka Be Mitondra Adihevitra Momba ny Fanabeazana Tia Tanindrazana Ao Shina, Indray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2017 16:43 GMT
Lui Hulan (1932-1947) dia Shinoa iray kaominista mahery fo ampiasaina betsaka any anatin'ireo bokim-pianarana.
Tamin'ny herinandro lasa teo, niely be tao Shina ny lahatsary iray ahitàna ankizy mpianatra nitomany no sady mitanisa ny mombamomba ny fiainan'ilay mahery fo kaominista Lui Hulan.
Tamim-“pifendrofendroana” ilay zaza no namaky ilay bokim-pianarana, fahaizana mitanisa ampianarina betsaka any an-tsekoly, ary niafara tamin'ny ranomaso havozona rehefa nihomehezan'ireo mpiray kilasy aminy. Ity ambany ity ny dika avy amin'ilay lahatsary, tao amin'ny Youtube:
Nizarazara be ihany ireo fanehoankevitra momba ilay lahatsary. Ny sasany tohina tamin'ny fanehoana fitiavan-tanindrazana nananan'ilay zaza, raha ny hafa indray niampanga ny rafi-panabeazana ao Shina ho fanasàna atidoha.
Teraka tamin'ny 1932, mbola 10 taona i Lui Hulan dia nandray anjara tamin'ny revolisiona kaominista Shinoa ary niditra tao amin'ny antoko CCP tamin'ny 1946. Nanampy ny CCP tamin'ny namonoana ny filohan'ny vohitra nisy azy izy tao Yunzhouxi, faritanin'i Shanxi ary notapahan'ireo miaramila Kuomintang ny lohany tamin'ny Janoary 1947, fony izy 15 taona monja.
Tsy misy hafa amin'i Lei Feng, Liu dia endrika fantadaza amin'ny fanabeazana tia tanindrazana Shinoa amin'izao vaninandro maoderina izao.
Betsaka tamin'ireo mpampiasa Weibo no nanaparitaka ilay lahatsary, ary ireto fanehoankevitra roa manaraka ireto no mamintina ireo fomba fijery samihafa momba ilay tranga:
Fanabeazana manasa atidoha. Tsy misy zavatra tokony hihomehezana. Tena mampalahelo. Mandrisika zaza iray ho faty no sady midera an'izany. Izany no mahatonga ny fiarahamonintsika ho tsy manaja ny maha-olona.
Lazain'ny sasany fa mandrisika ny tanora ho faty no sady manasa atidoha ilay tantara momba an'i Lui Hulan. Ireo olona kivalavala izay miaina toy ny bibikely sy ny alika tsy ho afaka ny hahatakatra ny fanahin'ireo maherifo nanao sorona ny tenany. Hainy ny fomba hiarovana ny mpiaradia aminy fony izy mbola 15 taona monja. Efa lehibe ianareo ary izay hany azonareo atao dia ny mampizarazara vahoaka. Amin'ny fomba fijerinareo, toetra maha-olombelona ny famadihana ny mpiaradia aminareo, andianà mpamadika [ianareo]. Hitràka tsy misy andianà diky tahaka izany ny firenena Shinoa.
Tsy niraharaha izay kabary miresaka mpamadika-tia tanindrazana any, nanamafy i @byelove1212 fa tokony ho lasitranà anjara asa miabo no ho asian'ny sekoly tsindrimpeo kokoa:
10 taona i Lui Hulan fony izy niditra tamin'ny revolisiona ary 14 taona raha nandray anjara tamin'ny famonoana ny filohan'ny vohitra nisy azy. Maty novonoina tamin'ny 1947 izy, teo amin'ny faha-15 taonany. Ireo novonoiny sy ireo maty dia samy Shinoa avokoa, namana avokoa. Na nandritry ny vanimpotoanan'ny revolisiona aza, tokony ho tsy natao fandresena lahatra akory ny toetsaina toy izany. Tsy misy antony azo hamarinina mihitsy hamelàna ankizivavy kely iray tsy manantsiny hanao sorona ny tenany ho an'ny antsoina hoe ‘revolisiona’. Ao anatin'ny vaninandro maoderina, tsy tokony ho amporisihina [ny fitondrantena tahaka izany]. Tokony ho mbola zaza hamaky boky, hihirahira, hihinana ody ambavafao, lavitry ny asa saina ary karakarain'ny rehetra izany ankizivavy 15 taona izany. Tsy ilain'ireo zanako ny hanaraka ireny antsoina hoe ‘maherifo’ ireny, izay namono ny mpiray tanindrazana taminy. Ny hianatra ny fomba filahatra no tokony hianaran'izy ireo, miasa amin'ny fomban'ny olona nahita fivoarana, tia ny tontolo iainana, manaja ny hafa, mahatoky sy faly, be herimpo sy tsara fanahy, tia manampy ny hafa sns… ireo fitondrantena fototra rehetra. Mety ho tena angovo miabo tsy manampaharoa izany.
Iray hafa mpampiasa Weibo “Head of Entertainment” (Lehiben'ny Fialamboly) niteny hoe:
Momba an'i Liu Hulan, ny fomba fijeriko dia ny hamelàna an'i Liu Hulan ho lasa tantara, aza ivavahana izy, aza soloina vava, aza avela hiverina ny tantara.
Roa taona lasa izay, efa nitranga ny adihevitra mitovy amin'izany, taminà endrika taratasy nifandefasan'ny raim-pianakaviana iray sy ny mpampianatra iray. Namerina namoaka ireo taratasy roa ireo tao amin'ny Weibo ny Ligin'ireo Tanora Shinoa Kaominista mba hanamoràna ny fifanakalozan-dresaka.
Ny an'ilay raim-pianakaviana dia ninoana ho mpitari-kevitra liberaly no nanoratra azy ary navoaka tsy nasiana anarana tamin'ny Aprily 2014. Ity ambany ity ny ampahany tamin'ny fandikàna ilay taratasy:
Dia navelan'ireo olona ireo ny zazakely iray vao 13 taona monja hiditra aminà adilahy politika miankina aman'aina. Raha ireo olona amin'ny taonany kosa mandeha miasa eny an-tany lemaka, izy lasa manatevina laharana vondron'olondehibe mba hanampy azy ireo hamono ny mpitarika ny vohitra misy azy. Taty aoriana, notapahana tamin'ny fomba feno habibiana tahaka izany koa ny lohany. Tsy mahita aho eto ,na kely aza, kalitao tokony hoderaderaina, na idealy. Ny mifanohitra amin'izay aza, ireo mpandrafitra tetikady midera azy no lany henatra. Nitombo niaraka tamin'ny karazana fanabeazana feno ady sy fankahalàna toy izany aho. Soa ihany fa tsy voafatotr'izany aho….ankehitriny, ampianarina hàka ohatra amin'i Liu Hulan ny zanako, marary toy ny voatsatoka antsy ny foko. Amin'ny maha-ray tomponandraikitra ahy, mandeha ho azy ny fiarovako ny zanako tsy ho tratry ny loza ara-panahy tahaka izany . Antenaiko ireo mpampianatra mba ho afaka hahatakatra sy hamela antsika hifady ny hetsika tahaka ireny.
Betsaka no nino fa ilay valiny avy amin'ilay “mpampianatra” dia ideology iray avy amin'ny antoko no nanoratra azy. Nanamafy ilay taratasy fa tokony homanina hiatrika ny ratsy indrindra ireo andian-taranaka tanora. Nasongadin'ilay valinteny ny sary iray ahitàna miaramila Japoney milalao amin'ny lefon'ny basiny ny fatin-jazakely Shinoa iray nandritry ny Ady Lehibe Faharoa.
Ity ambany ity ny fandikàna ampahany tamin'ilay taratasy:
Na miaina anaty vanimpotoana milamina aza ny zanatsika, tsy misy na iza na iza afaka miantoka hoe handry fahalemana mandrakizay izy ireo. Te-hiaina lavitry ny herisetra sy ny politika isika, nefa tsy hisy izany, tsy afaka ny hitoetra lavitry ny politika isika ary tsy afaka ny hanakana ny ady sy ireo tranga hafa mampahory…Tsy hoe fotsiny mila anganonganon-jaza ny zanakareo fa koa mila maherifo. Afaka manana izay andrian'ny fony izy sady mahafantatra ny fomba hankasitrahany ny hafa. Mihevitra ianareo fa tsy tokony hanaraka ny nataon'i Liu Hulan izy, saingy feno maherifo hafa nameno ny tany. Tsy nisy nidiran'ny politika, tsy nahery setra ve ireny maherifo ireny? Manao ahoana ny amin'ilay andriandahin'ny mpamono olona na ny amin'i “spider man”?
Ary farany, kianin'ilay taratasy ho mahamenatra ny fihetsik'ilay raim-pianakaviana :
Ny fisainana tahaka izany dia toy ny mifandray amin'ireo trangan-javatra ara-kolontsaina “manàla baràka ireo maherifo”, niseho tsy ela akory izay. Tsy misy tsy mety na kely aza amin'ny famelàna ny ankizy hianatra momba ireo maherifon'ny fireneny… Maherifo iray tsy manam-paharoa i Lui Hulan, mbola tena kely tokoa dia nanao sorona ny tenany. Tantara ratsy tamin'ny fotoana niainany io, saingy tsy azontsika ampangaina fotsiny izy ka ho angatahantsika “hihatakataka” ny zanatsika …